Mpanamboatra Matufacturer Matora Matora Synwin | Poketran'ny lohataona
Sakafo lohataona mitohy
Bonnell Spring Matoria
Mandrosoa ny kidoro
15cm mihodina matotra
20cm mihodina matotra
25cm manorata matotra
5 Star Hotel Cartress
4 Star Hotel Matora
3 Star Hotel Matora
Memory Foam Mangory
Momba ny synwin
Ny fizotran'ny fanamboarana
Foibe traikefa natory
Kidoro Purchase Guide
Synwin kidoro orinasa mamokatra indrindra lohataona kidoro, paosy lohataona kidoro sybonnell spring kidoro any Sina. Nahoana no mifidy anay.
15 TAONA FOTOANA KOROR ①
15 taona traikefa amin'ny fanamboarana kidoro sy kojakoja kidoro.
30000PCS FIVORIANA IHANY ③
30000 pcs isam-bolana vokatra, azo antoka famatsiana, fanaterana haingana
Synwin kidoro mihoatra ny 14 taona traikefa fanondranana manerana izao tontolo izao, manatrika isan-taona foara toy ny Canton Fair, CIFF fanaka tsena,
② 70% MATAVY ATAONAY
70% akora vita aminay, indrindra nandritra ny 32 taona traikefa amin'ny rafitra lohataona
④ 80000 M2 FARITRA FOTOANA
Ny orinasanay dia manana mihoatra ny 80000 metatra toradroa, miantoka famatsiana marin-toerana isam-bolana.
⑥ ODM SY OEM
Omeo drafitra ODM sy OEM ary serivisy tokana.
Karazan'ny vokatra Premium
Amin'ny maha matihanina azyChina mpanamboatra kidoro, Synwin, manomekidoro mahazatra, kidoro am-paosy, kidoro lohataona bonnell,kidoro lohataona mitohysns.
Synwin, mpamatsy kidoro matihanina - Ny kidoranay dia ampiasaina betsaka amin'ny fivarotana antsinjarany, fivarotana lehibe, mpivarotra ambongadiny, mpaninjara ary tetikasa hotely kintana sns.
100% Factory mivantana fivarotana-Tsy misy mpanelanelana manao ny fiovana, mitahiry vola be, ary manampy anao hahazo mifaninana kokoa vidiny
15 taona antoka ny lohataona rafitra, mihoatra noho ny fampiononana. Ny torimaso tsara dia manomboka amin'ny kidoro tsara.
Sary famolavolana maimaim-poana ho an'ny mpanjifa an-tserasera, manampy anao amin'ny varotra haingana.
RSB-PT23, Bonnell lohataona an-trano mampiasa ondana ambony
RSP-BT26, Pocket spring roll ao anaty boaty
RSP3-ETM25.5 Mihodinkodina ny lohataona paosin'ny foam-paosy
RSB-R22 Roll up bonnell spring online kidoro
RSP-ETL28 Loharano am-paosin'ny hotely latex voajanahary
RSB-2BT roa mampiasa latex+foam-pahatsiarovana kidoro hotely
RSP-2S Economic online ODM kidoro lohataona
RSB-B21 Mihodinkodina ao anaty baoritra mafy tampony roa amin'ny fampiasana kidoro
2000$USD fihenam-bidy ho an'ny 40HQ, mandefa fanontaniana izao!
Nanome serivisy famokarana OEM / ODM izahay nandritra ny 25 taona. Na inona na inona fepetra takinao, ny fahalalanay sy ny traikefanay dia manome toky anao ny vokatra mahafa-po. Manao ezaka mafy indrindra izahay mba hanolotra kalitao tsara, serivisy afa-po, vidiny mifaninana, fanaterana ara-potoana ho an'ny mpanjifanay sarobidy.
Synwin lohataonampanamboatra kidoro , nanomboka tamin'ny 2007, hita ao amin'nyFoshan, Sina. Efa 15 taona mahery izahay no nanondrana kidoro. toy nykidoro mahazatra,kidoro lohataona,kidoro lohataona bonnell,kidoro am-paosy ary kidoro hotely sns. Mandritra izany fotoana izany, toy ny fanaompamatsy kidoro, Tsy vitan'ny hoe afaka manome ny kidoro habe mahazatra ho anao izahay, fa afaka manoro ny fomba malaza araka ny traikefanay momba ny varotra. Ny kidoro dia ampiasaina betsaka amin'ny mpivarotra ambongadiny, fivarotana mpivarotra, fivarotana lehibe, mpanjifa an-tserasera ary ny sasany amin'ireo tetikasa hotely sns.
Manokan-tena hanatsara ny orinasanao kidoro izahay. Andao hiara-hiditra amin'ny tsena. Ny kidoro Synwin dia mandroso hatrany amin'ny tsenan'ny fifaninanana. Afaka manolotra serivisy matory OEM / ODM ho an'ny mpanjifanay izahay, ny lohataona kidoro rehetra dia afaka maharitra 15 taona ary tsy midina.
2021 Pocket coil vaovao ho avy
Kidoro ambony ondana vaovao mamoaka
Fonosana amin'ny milina Roll up
3zones pocket spring core ao amin'ny trano fanatobiana entana
Amin'ny maha mpanamboatra kidoro Shina 15 taona, Synwin dia nanome mpanjifa eran-tany amin'ny kalitao tsara indrindra amin'ny vidin'ny orinasa mifaninana,
Ny mpamatsy kidoro Synwin dia nomena affimation ambony avy amin'ny mpanjifany kidoro na anatiny na ivelany. Manaiky kidoro mahazatra izahay, misy habe rehetra, misy teti-bola, misy lamina misy. Synwin Famatsiana singa ho an'ny Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland ary marika iraisam-pirenena malaza hafa nandritra ny 4 taona mahery. Ny kalitaon'ny vokatra dia tena eken'ny mpanjifa.
Hotely 5 kintana
Mpivarotra 100 ambony eran-tany
Fivarotana fanaka sy kidoro ambony indrindra
Tranonkala fiantsenana an-tserasera
Synwin dia afaka mamokatra mahazatra kidoro, paosy lohataona kidoro, bonnell lohataona kidoro sy mitohy lohataona kidoro,kidoro hotely sns. Indro manome anao ny anaympanamboatra kidoro vaovao momba ny orinasa, famolavolana vaovao kidoro, lamina vaovao arympamatsy kidoro vaovao. Eto ianao dia afaka mahita ny fampidirana ny orinasa, ny kolontsain'ny orinasa, ny ekipan'ny varotra ary ny vokatra tena izy.
Mamakia iray minitra fotsiny mba hahazoana fahatakarana haingana kokoa an'i Synwin!
Inona no atao hoe kidoro lohataona?
Misy soso-kevitra mividy kidoro
Inona no kidoro mety kokoa hatorian'ny ankizy?
Ahoana no mifidy paosy lohataona kidoro?
Miresaha aminay izao,
METY AFAKA MANAMPY ISIKA!
Ry malala, hamaly aho afaka 12 ora. Voaaro daholo ny hafatrao!
Mitadiava anay amin'ny alibaba: swmattress.en.alibaba.com.
Lazao hoe: +86-757-85519362/ +86-757-85519325
Contact Sales ao amin'ny SYNWIN.
Copyright © 2022 Synwin Mattress (Guangdong Synwin Non Woven Technology Co., Ltd.) | Zo rehetra voatokana 粤ICP备19068558号-3